Mitondra hery ny vavaka
“Fa izay rehetra naterak’Andriamanitra dia maharesy izao tontolo izao; ary ny fandresena izay enti-maharesy izao tontolo izao dia ny finoantsika” 1 Jao 5:4
Rehefa manao asa fisoronana ho antsika any an-danitra i Jesôsy, Ilay Mpanalalana, dia miasa ao anatintsika ny Fanahy Masina, mba hahatonga antsika haniry sy hanatanteraka izay sitrapony. Ny lanitra manontolo mihitsy no liana amin’ny fanavotana ny fanahy. Raha izany, inona no antony mbola hisalasalantsika fa efa manampy antsika tokoa Andriamanitra ary hanampy antsika? Tokony hanana fifandraisana tsy tapaka amin’Andriamanitra isika, araka izay ampianarintsika ny hafa. Ao amin’ny fanahy sy ny teny, dia tokony ho laharano ho an’ny hafa isika, satria i Kristy Ilay ao anatintsika dia loharano miboiboika mitondra fiainana mandrakizay. Mety hitsapa ny finoana sy ny faharetantsika ny alahelo sy ny fijaliana, nefa miaraka amintsika ny famirapiratan’ny fanatrehan’Ilay tsy hita maso, ary tsy maintsy miafina ao ambadik’i Jesôsy ny maha-isika antsika.
Ampaherezo ny fiangonana, akaro ho any amin’Andriamanitra amin’ny vavaka izy ireo. Lazao azy fa rehefa mahatsapa ho nanota izy ka toy ny tsy hanana hery hoentina mivavaka. Maro no mahatsiaro ho tsinontsinona noho ny tsy fahombiazana, satria lavon’ny fahavalo raha tokony ho nandresy azy. Nihanalemy izy ireo noho ny fifikirana amin’izao tontolo izao, ny fitiavan-tena ary ny filan’ny nofo, ka nihevitra fa tsy ilaina intsony ny manatona an’Andriamanitra, hevi-dratsy avy amin’ilay fahavalo anefa izany. Mety ho menatra na mietry tanteraka izy ireo, saingy tsy maintsy mivavaka ary mino. Rehefa miaiky ny fahotany izy ireo, hamela ny fahotany Ilay mahatoky ary hanadio azy ho afaka amin’ny tsy fahamarinana rehetra ( 1 Jao. 1:9). Mety hivilivily ny saina amin’ny fotoana ivavahana, nefa aza kivy, ento ho eo amin’ny seza fiandrianana izany ary aza miala eo mandra-pahazoanao ny fandresena.
Mieritreritra ve ianao fa hosedraina amin’ny fihetseham-po mahery ny fandresenao? Tsia, "ary ny fandresena izay enti-maharesy izao tontolo izao dia ny finoantsika"1 Jao. 5:4. Fantatr’Andriamanitra ny fanirianao, manakaikeza Azy amin’ny finoana, ary antenao ny fandraisana ny Fanahy Masina.
Mifehy ny asa ara-panahy rehetra ataontsika no andraikitry ny Fanahy Masina. Nomen’ny Ray antsika ny Zanany mba hitoeran’ny Fanahy Masina ao anatintsika amin’ny alalany, ka hitarihany antsika ho eo amin’ny Ray. Manana ny Fanahy mpanalalana isika amin’ny fiasan’Andriamanitra , izany no hahafahantsika mitaraina amin’Andriamanitra toy ny ataon’ny olona iray mitaraina amin’ny namany. ST, 03 Okôbra 1892.